Dowladda Soomaaliya oo Itoobiya u gacan gelisay Sarkaalkii ONLF - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dowladda Soomaaliya oo Itoobiya u gacan gelisay Sarkaalkii ONLF
August 28, 2017 admin216
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in Sarkaalkii ONLF ka tirsanaa ee todobaadkii hore la keenay Muqdisho loo gacan geliyay dowladda Itoobiya.
La Taliyaha Madaxweynaha Jubbalad Cabdi Cali Raagge iyo Taliye kuxigeenka Nabadsugida Jubbaland Col. Gaas ayaa la sheegay in Sarkaalkan diyaarada lagu qaaday Sarkaalkan ka tirsan ONLF ay ku wehliyeen.
Wararka ayaa intaa ku daraya in diyaarada Milateri looga sii qaaday garoonka diyaaradaha Baydhabo, waxaana la geeyay magaalada Godey, halkaasoo galabta ay diyaarada Ethiopian Airlines ka qaaday, isla markaana ka dejisay magaalada Nazaret oo ah ku taal xarunta ugu weyn ee Sirdoonka Itoobiya.
C/xakiin Qalbi Dhagax ayaa muddo ku noolaa koofurta Gaalkacyo, waxaa uu ka soo jeedaa Gobolka Wardheer ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Deg Deg Rw Khayre oo u yeeray Wasiirada Ganacsiga